Advanced Registry Clear 2.3.3.8 Full | HARRIS
Advanced Registry Clear 2.3.3.8 Full
Windows စနစ်မှာ အရေးကြီးဆုံးဟာ Registry ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့စဉ်နီးပါး Software ထည့်ကြ၊ ဖြုတ်ကြ၊ Virus ကလည်း ဝင်လာ. စသည်ဖြင့် Registry မှာ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ အမှားတွေ၊ မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်လာပြီး Windows System ဟာ ပုံမှန် အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်.. ဒါကို Windows က သူ့ကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူး.. Software တစ်ခုခု သုံးပြီး ဖြေရှင်းရပါတယ်.. Advanced Registry Clear 2.3.3.8 ဟာ Windows စနစ်အားလုံးရဲ့ Registry တွေကို အကောင်းဆုံး သန့်ရှင်းပေးတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. မှားနေတာတွေ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ ပျက်နေတာတွေ၊ မလိုအပ်တာတွေကို ပြုပြင်၊ ဖယ်ထုတ် ပြီး အကောင်းဆုံး System တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...
Advanced Registry Clear can easily perform various tasks of maintaining the registry and optimize different system elements. This application works quite simple and you only have to makeafew mouse clicks to start using it.
Advanced Registry Clear will allow you to detect erroneous entries in the registry, fix problems and optimize globally. You can also free up space on the hard drive, see information system, find duplicate files and other options.
In short, an excellent application for any user of Windows and is compatible with the latest versions of the system. Advanced Registry Clear is the best set of tools to repair, fix and optimize the Windows registry state automatically and effectively.
Setup Download : 3.71 MB
Crack Downlaod :
Nero Multimedia Suite Platinum 12.5.01900 Full Wit...
Windows 8 တွင် Myanmar Fonts အမှန်ပေါ်ချင်သူများအတွ...
Techspace နည်းပညာဂျာနယ် Volume2- Issue9(29.05....
Android User တွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ All In One Booste...
AVG Mobile AntiVirus Security PRO v3.2.3
YouTube Video Downloader PRO 4.1 Full
အာကာသထဲမှာ တိုက်ပွဲဆင်တဲ့ ဂိမ်း Plasma Sky - rad s...
Android 4.1.1 နဲ့ 4.1.2 တွေမှာ မြန်မာ Font အဆင်မြေ...